အနက်ရောင် Fashion နဲ့အရမ်းဂေါ်နေတဲ့ ယဉ်လက် - Zeekwat Hot News
အနက်ရောင် Fashion နဲ့အရမ်းဂေါ်နေတဲ့ ယဉ်လက်
July 17, 20190179
ပရိသတ်ကြီးရေ…. သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လက်ကတော့အက်ရှင် ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အတူ ပရိသ တ်ေ တွ ရဲ့ ရင်ကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော် သရုပ်ေ ဆာင်ပိုင်းမှာ တကယ်တော်တဲ့ တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် ကြယ်ပွင့်လေး တစ်ပွင့်ပါနော် ။
အက်ရှင်မင်းသမီးလေး လို့တောင် ထင်ရက်စရာ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ အပြုံးချိုချိုလေး တွေနဲ့ သူမရဲ့ အလှတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အထူး သတိပြု တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ပါနော် သူမ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ် မှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နှစ်ပြီး လုပ်ကိုင်လေ့ ရှိတာကြောင့် ခနလေး အတွင်းမှာပဲ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်လို့ နေနိုင်ခဲ့တာပါ။
သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှား တွေကတော့ ဗီဒီယို နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ကို ရိုက်ကူးနေပြီး သူမ ၀ါသနာ ပါရာ အနုပ ညာ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်နေတာပါ သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ်လေးတွေကို တော့ သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် တခုဖြစ်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ နေ့စဉ်လိုလို တက်ဆက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
မကြာသေးမီ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်က ကမ္ဘာကျော် Fighter တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Challenge တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုလင်းဖုံးကို ခြေထောက်နဲ့ အမိုက်စားကန် ချက်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတာ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားခဲ့ ပါတယ်နော်။
အခုတခါမှာ ဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ အနက်ရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန်အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အနကျရောငျ Fashion နဲ့အရမျးဂျေါနတေဲ့ ယဉျလကျ
ပရိသတျကွီးရေ…. သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ယဉျလကျကတော့ အကျရှငျ ဇာတျကားတှနေဲ့ အတူ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ရငျကို စှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ တကယျတျောတဲ့ တကျသဈစ သရုပျဆောငျ ကွယျပှငျ့လေး တဈပှငျ့ပါနျော အကျရှငျမငျးသမီးလေး လို့တောငျ ထငျရကျစရာ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေး တှနေဲ့ သူမရဲ့ အလှတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ အထူး သတိပွု တဲ့ မငျးသမီးလေး တဈယောကျပါနျော သူမ ဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပျ မှာ စိတျရော ကိုယျပါ နှဈပွီး လုပျကိုငျလေ့ ရှိတာကွောငျ့ ခနလေး အတှငျးမှာပဲ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ အဖွဈ ရပျတညျလို့ နနေိုငျခဲ့တာပါ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပျရှား တှကေတော့ ဗီဒီယို နဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ကို ရိုကျကူးနပွေီး သူမ ဝါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပျကို ကွိုးကွိုးစားစား လုပျကိုငျနတောပါ သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှား မှု ပုံရိပျလေးတှကေို တော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ တခုဖွဈတဲ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါမှာတော့ နစေ့ဉျလိုလို တကျဆကျပေးလေ့ ရှိပါတယျ။ မကွာသေးမီ သရုပျဆောငျ ယဉျလတျက ကမ်ဘာကြျော Fighter တှကွေားမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ Challenge တဈခုဖွဈတဲ့ ပုလငျးဖုံးကို ခွထေောကျနဲ့ အမိုကျစားကနျ ခကျြဖှငျ့ပွခဲ့ပါတာ ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားခဲ့ပါတယျနျော။ အခုတခါမှာ ဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှတဲ့ အနကျရောငျဝတျစုံလေးနဲ့ မိနျးကလေးဆနျဆနျအလှ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ချစ်သူကို အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ချွဲလိုက်တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ